Shina Float Glass sy mpanamboatra | LYDGLASS
Inona no ilana vera mitsingevana?
Inona ny vera mitsingevana? Ny vera mitsingevana dia vera tena malama sy tsy misy fanodikodinana izay ampiasaina amin'ny famolavolana zavatra fitaratra hafa toy ny vera misy laminasy, vera mafana mafy, sns.
Fa maninona no maitso vera?
Ny vera mitsingevana tsotra dia maitso amin'ny ravina matevina noho ny fahalotoan'ny Fe2 +.
Mahery noho ny vera mitsingevana ve ny vera antonony?
Sarotra kokoa ny vaky ny fitaratra maharary, fa mitera-doza bebe kokoa kosa rehefa vaky. Mifanohitra amin'izany, ny fitaratra mitsingevana dia mora vaky kokoa, fa ny hazavan'ny vera maranitra kosa dia hiteraka olana lehibe amin'ireo mety hiditra an-tsehatra.
Inona no karazana vera mitsingevana azonao omena?
Afaka manome vera mitsingevana 3mm-25mm mazava isika, vera mitsingevana fotsy fotsy, vera miendrika modely ary vera mitsingevana Tinted.
Fitaratra mitsingevana, fitaratra mitsingevana varahina Euro, vera mitsingevana volondavenona Euro, fitaratra manga ranomasina, fitaratra manga Ford, vera volondavenona, vera mifono, vera Low-E.
Teo aloha: Diffuse Glass ho an'ny trano fonenana
Manaraka: CE Certificate China Manufacturer Glass an'ny tontolon'ny fefy fitaratra ho an'ny fandroana lomano ivelany
Glass fitetezana 3mm
4mm fitaratra mitsingevana
Glass 5mm mitsingevana
Vera mitsingevana mazava
Vera mitsingevana miloko